Beesha Degoodiya oo Teegeeray Shirka Elderot.
KA: Beesha Degoodiya
KU: Ururka IGAD
KU: Saxaafada Caalamka
Ujeedo Baaq Deg deg ah.
Kadib markii ay Waxgaradka iyo Odayaasha Beesha Degoodiya ay yeesheen dood dheer oo ay ku falanqeyeen arrimaha shirka Eldoret iyo kii Carta ee dalka Jabuuti ee lagu soo dhisay DKM. Sida la ogyahay beesha Degoodiya oo si xoog leh ugu qayb gashay shirkii Carta hase yeeshe aan waxba laga siin xildhibaanidii iyo Dowladii Cali Khalif iyo tii Xassan Abshir.
Halkaas waxaa ka muuqda cadaalad daro weyn una baahan in la saxo. Waxay Beesha Degoodiya isku raacday in si buuxda loo taageero shirka Eldoret balse lagumartiqaado shirka waxna laga siiyo ergooyinka shirka Eldoret.
Haddaba beesha Degoodiye waxay raali ka tahay shirka dib u
heshiisiinta ee Soomaalida loo qabanaya maadaama ay tahay beel muhiim ah, nabaddana jecel.
Sidaas darted, waxaan wadamada safka hore sida Kenya, Itoobiya iyo
Jabuuti ee IGAD iyo caalamkaba ka codsaneynaa in aannu ka qeyb qaaddanno arrimaha dib u heshiisiinta Soomaaliya. Sida ugu dhaqso badana aan ku helno waraaqaha martiqaadka shirka Kenya.Waxaa kale oon aa Soomaali weynta ka cosnaneynaa inay taageero buuxda siiyaan Beesha Degoodiya oo laga faquuqay Ummadda Soomaaliyeed
Waxgaradka iyo Odayaasha Beesha Degoodiya.
Fadlan qoraalkaan wixii kala xiriir abdi_omar@hotmail.com